Asingomzamo owothusa abantu | Martech Zone
NgoLwesibini, Agasti 22, 2006 NgoMvulo, Agasti 24, 2009 Douglas Karr
Umphuhlisi omkhulu emsebenzini wam namhlanje utyhile ingxelo entsha awayeyibhale kwimpelaveki. Ingxelo entle, eyakhiwe ngeenkonzo zokunika ingxelo nge-SQL, isebenza kakuhle, ichanekile, kwaye ihlelwe kakuhle.
Njengoko sikhupha oku kubantu bethu bangaphakathi, umphuhlisi wathi abantu kwinkampani baya kumangaliswa, kodwa abanye abaphuhlisi baya kufumana intsini kuba bayazi ukuba kwakulula kangakanani ukwenza ingxelo. Abanye abaphuhlisi banokuhleka, kodwa ayingabo abafumana ingqalelo.
Ndiphendule kumakhi ukuba ayingomzamo othusayo abathengi bethu okanye abasebenzi bethu. Abazi ukuba kuthatha ntoni emva kwemiboniso ukwenza izinto zisebenze. Kwaye abayikhathalelanga (njengoko bekungafanelekanga) ukuba isebenza njani. Zizimvo, inyathelo, kwaye uninzi lwefuthe elimangalisa abantu. Umsebenzi onzima unendawo yawo, ungandivi kakubi. Njengokuba ndikhula, nangona kunjalo, ndibona abantu abaninzi abonyuselweyo, abaphumeleleyo, okanye abazizityebi- ingekuba basebenze nzima, kodwa ngenxa yokuba babenemibono emihle, inyathelo elikhulu, okanye ifuthe elikhulu.
YIMIBONO, INITIATIVE, kwaye uninzi lwazo zonke, IMPACT eyothusa abantu- hayi umzamo.
Oko akuthethi ukuba andisebenzi nzima. Ndisebenza rhoqo-ibhlog yam iyinyani yekhefu lemihla ngemihla kum. Ngesidlo sasemini kunye nokuhambahamba emva kwemini, lonke ixesha lam liyasebenza, ebhedini, kufundwa, okanye ixesha nabantwana bam. Ndiyawuthanda umsebenzi, yiyo loo nto ndiwenza. Andicingi ukuba ifana neentsuku ezilungileyo apho 'ukusebenza nzima kuhlawula'. Ezo ntsuku kudala zisemva kwethu! Ukusebenza nzima kunokuhlawula amatyala, kodwa akuhlawuli ekuhambeni kwexesha. Konke oya kuba nakho ekupheleni kobomi bakho yimfumba yomsebenzi owenziweyo.
Umsebenzi womphuhlisi kusenokwenzeka ukuba awuzange uthathe mzamo ungako- kodwa umbono wakhe, inyathelo lakhe lokuwenza, kunye nefuthe eliya kuba nalo kubaxumi bethu iya kuba yinto eyinzuzo kuyo yonke inkampani.
Indima yeBlogging kuPhuhliso lwe-IE7